Usuku lwentsha (Youth Day): Passionate For Future Legacy Services NPO – The Ulwazi Programme
Usuku lwentsha (Youth Day): Passionate For Future Legacy Services NPO
Unyaka nonyaka ngomhlaka-16 Jini kubungazwa amagalelo abafundi abalwa nesinqumo sikahalumeni wobandlululo esasiphoqa abafundi abamnyama ukuthi bafunde ulimu lwesiBhunu ngenkani ngesikhathi semfundo eyayibizwa ngokuthi iBantu Education. Lolusuku lubungazwa nje liningi igazi elachitheka lentsha emnyama ngonyaka ka-1975, ngoba phela babengaphezulu kwezinkulungwane ezingamashumi amabili endaweni yase Soweto. Kubikwa ukuthi bangaphezu kwamakhulu ayisikhombisa abaphangalala khona lapho bedutshulwa amaphoyisa obandlululo kanti abanye abafundi babelimele kakhulu ngenxa yodlame olwaphethuka kulowo mbhikisho. Usuku lomhlaka-16 ke lubungazwa unyaka nonyaka ukuqinisekisa ukuthi izithukuthuku zalabo abaphangalala aziweli phansi kanti nendima abayidlala ayipheli emqondweni wabantu. Lolusuku phambilini belwaziwa ngokuthi iSoweto Day kodwa ke lokhu sekushintshile manje selubizwa ngosuku lwentsha.
Ziningi ke izinhlelo eziba khona ngalolusuku kusukela ezinhlakeni nase mnyangweni kaHulumeni kanye ke nezinye izinhlaka zomphakathi. Ngalolusuku ke kujwayeleke ukuthi kube nezinhlelo zokubuyisela emphakathini, kusizwe nalaba abahlwempu kanye nabakhubazekile. Izinhlangano zentsha zaseThekwin iPassionate For Future kanye ne Legacy Services NPO zihlele ukuba yingxenye yalolusuku ngokuthi zibuyisele emphakathini wakhona eThekwini. Lezinhlangano ziphethwe abafundi basezikhungweni zemfundo ephakeme iMangosuthu University of Technology kanye neNyuvesi yakwaZulu (UKZN). Lezinnhlangano zihlele ukuhambisa izimpahla zokugqoka kulaba abahlwempu nabangenawo amakhaya, abahlala emgwaqeni edolobheni eThekwini ngase sibhedlela iAddington Hospital.
Kanti ke banxusa abangakwazi ukuthi bafake isandla ngokuthi baphisane ngezimpahla abangazisebenzisi bafake isandla nabo ukuze lolusuku luzoba impumelelo. Izimpahla abazozihambisa bazinikwa abafundi abahlala ezindaweni zokuhlala ezikhungweni zokufunda (University residences). Kanti ke ngeke bagcine ngokunikezela ngezimpahla kepha bazophinde bathule nenkulumo egqugquzelayo iphinde yakhe kwabahlala edolobheni abangenamakhaya. Ofisa ukufaka isandla angaxhumana noNhlanhla kwinamba yocongo ethi-079 415 2851.
Categories News Tags Usuku lwentsha